>နေဝန်းထွက်ရာမြေသို့ (၂) | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: ဝတ္ထုရှည် — 29 Comments
သြော်…….. ဂျပန်တွေ ထွင်စရာမရှိ ကြံကြံဖန်ဖန် အိမ်သာအိုးတောင်မချန် စက်တွေတက်ပြစ်တယ်။ရန်ကုန်မှာသာ ဒါမျိုးကြီးတပ်လိုက်ရင် အယ်ဒီဆင်ကို အမြဲလေးစားလွန်းလို ခဏခဏဂုဏ်ပြုနေတာနဲ့ ကြုံရင်တော့ ဒုက္ခ။ဆက်တငင်ငင်နဲ့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံကြီး ခရီးဆက်သွားရမယ်ဆိုတော့……………..။(အမေရိကန်မှာ အောက်တိုဘာ ၂၁ရက်နေ့မှာ အယ်ဒီဆင်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ တမိနစ်မျှ လျှပ်စစ်မီးတွေမှိတ်ပြီး နေကြတယ်။အဲဒီနေ့ဟာလဲ လျှပ်စစ်မီးသီးကို စတင်တီထွင်သူကြီး အယ်ဒီဆင်ကွယ်လွန်တဲ့နေ့ပါပဲ။ ကျုပ်တို့ဆီမှာကတော့ သူကို တမိနစ်မက အမြဲနီးပါး သတိရတိုင်းကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။)
>အိမ်သာခွက် ကိုကြုံဖူးတယ်နှိပ်လိုက်ရင် ရေပန်းတက်လာတာလေမိုက်တယ် အတွေ့ကြုံအလွဲလေးတွေဖတ်သွားတယ်ဗျား)
>ဘာဖြစ်လို့ အိမ်မှာ အသစ်ဆိုပြီးမတက်လဲမသိဘူး ကိုရေချမ်းပြောမှ လာခဲ့တာ ခဏ ဖတ်ဦးမည်
>ကိုချမ်းလင်းနေရေ…လာဖတ်ပါတယ်ချင့်..အလွဲလေးတွေကို မှတ်သားသွားပါတယ်..ကိုယ့်အလှည့်ကျ အဲလိုမဖြစ်အောင်လေ.. ဟိဟိ……
>ဟိဟိ အလွဲလေးတွေ ဟားဟားးးး ကိုရေချမ်းရေ ဖတ်သွားတယ်နော့် ဟက်
>ကိုချမ်းရေ..အတွေ့အကြုံလာဖတ်တယ်။ ကောင်းတယ်ဗျ။ ရယ်စရာလေးတွေနဲ့အတူ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖော်ပြထားတာ ကောင်တယ်။
>အတွေ့အကြုံလေးတွေ မျှဝေတာ ကျေးဇူး ကိုချမ်းလင်းနေရေ.. အခုဆိုရင် ချစ်ဇနီးအေးမြနဲ့ ပျော်ရွှင်နေပြီထင်ပါတယ်ဗျာ။yu ya
>ကျင့် သုံးနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လုံးဝကျင့် သားရသွားတဲ့ နိူင်ငံတွေရဲ့ ပြရုတ်တစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်။ကြိုးစားသလိုအောင်မြင်နိူင်ပြီး လူကိုလူလိုတန်ဘိုးထားတဲ့ နိူင်ငံတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုလို့ ပြောချင်ပါတယ်။လုံးဝကွာခြားမှုကြီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ လေဆိပ်ကြီးလဲရောက်ရောမီးကလေးတွေခပ်မှိုန်မှိုန်နဲ့အမှောင်ထဲတိုးဝင်လာရသလိုပါ၊အဝရောက်ရောယူနီဖောင်းပြာတွေပြေးထွက်လာပြီး အထုပ်တွေဆွဲကြပါရောဗျာ။ဟုတ်ပါသလား..လို့ ။
>အဖြူလေးရေ အမှန်ပဲဗျာ။ရီနေဆန့်ခေတ်နဲ့ သမိုင်းဦးဘုံမြေစနစ်ကွာဟသလိုပေါ့။
>အကိုရေ အိမ်သာထဲမှာ ချောက်ကျနေပုံကို ဖတ်ပီး ရီလိုက်ရတာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မြန်မာဆို အနှိမ်ခံရပုံက ပတ်စပို့ပြရရင်တောင် သူတို့က သေချာ ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် ကြည့်တာလေ မမြင်ဖူးရှာလို့ ထင်ပါရဲ့ အကိုရယ်အကိုရေ အကို့အမျိုးသမီး အမရဲ့ မွေးနေ့ကိုလဲ နောက်ကျပေမဲ့ နောက်ကျဆုတောင်းလေး တောင်းပေးသွားပါတယ်နော် ချစ်စဖွယ် သားသားလေးနဲ့အတူ နောက်ထပ် ထပ်တိုးလာမယ့် ကလေးလေးချစ်သော ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် ဘဝလေးကို အသက်ထက်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ချစ်တဲ့ ညီမအနော်
>ကိုရေချမ်းတို့ကတော့ လုပ်ပြီဗျာ… ဟဲဟဲ…အဆန်းတွေချည်းပဲ ဖြစ်လိုက်ရင်….ကျနော့်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲဗျ… ဂျပန်လေဆိပ်မှာ တဆင့်နားရတယ်လေ… အဲဒါ ဗိုက်ကနာလာတော့အိမ်သာသွားချင်လို အကူညီတောင်းကြည့်တာ ခဏဆိုပြီး… တအောက်လည်းနေရော လေယာဉ်ကထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ မသွားလိုက်ရဘူး သွားလိုက်မိရင်လည်းဖြစ်မှာ သေချာတယ်ဗျို့… ဟဟ.. လေယာဉ်ပေါ်မှာပဲ ပြီးသွားတယ်… လေယာဉ်ပေါ်မှာလည်း လန့်ဖျန့်မိသေးတယ်ဗျ… ရေလောင်းတော့ ဟဟ.. ကျွီးးးးးးးးးးးး ဆို… ဖြစ်ရမယ်ဆို…. ဟဟဟအင်း… ကိုယ့်နိုင်ငံကလွဲရင် ကျန်နေရာတွေမှာ တိုးတက်နေကြတယ်နော်…ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်သားတွေကတော့ ခေတ်မှီကြပါတယ်ဗျ…ဟဲဟဲ…ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ…
>ကို ချမ်းစံရေ…ပထမတော့ နောက်မှ လာဖတ်တော့မယ်လို့…ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ပြုံးစိစိဖြစ်လာ ဖြစ်လာအဖြစ်တွေက တူလွန်းလို့ သဘောကျစွာဖတ်သွားပါတယ်..ကျနော်တောင်ရေးထားသေးတယ် စိတ်ကမပါလို့ မတင်ဖြစ်ဘူး…မဆင်တူဘူး… ယိုးမှားလေးပေါ့ဗျာ…အိမ်သာခွက်ရေပန်းစနစ်ကို ဥရောပကိုရောင်းရင်ကောင်းမယ်..း)))အတွေ့အကြုံတွေက အမြဲတမ်းအမှတ်ရစရာတွေနော်…ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ပျော်ရွင်သွားလို့ ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိုးစိန်ခုတစ်လော စိတ်တွေ အပြင်ထွက်နေ လမ်းပျောက်နေလို့ မနည်းလိုက်ဖမ်းနေရလို့ ပါခုလိုသတိတရရှိတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….
>လွဲမှလွဲတတ်ပါလေပေါ့ဗျာ… အားလုံးလည်း လွဲနေတာပါပဲ။ ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း အလွဲတွေဖြစ်ပြီး သူများ နိုင်ငံမှာလာနေနေရတာလေ။ အစ်ကိုတို့များ ကံကောင်းပါတယ်ဗျာ။ သားနဲ့ မယားနဲ့ အေးဆေး ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်နေရပေါ့။ ဟီး
>အား ဖတ်ရတာမိုက်တယ် ဗျာ အစအဆုံးပဲ ဒီလောက်စာရေးကောင်းတာ အရင်က ဟဒယ ဟာသမဂ္ဂဇင်းက ဆူဒိုနင် ပြောတဲ့ တောသားလည်းဟုတ်နိုင်ပေါင်ခင်ရယ် လိုပဲ ဖတ်ရတာ အရသာ ရှိလိုက်တာ အတွေ့အကြုံအလွဲလေးတွေက ရှည်ပေမယ့်အီမသွား ရိုးမသွားပဲ ဖတ်ရတာ ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်
>ခရီးသွား အတွေ့အကြုံ လေးတွေကို လာဖတ်သွားပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ အရပ်၊ ကိုယ်နဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ ဓလေ့ရှိတဲ့ နေရာကို ရောက်ရင် အလွဲလွဲအချော်ချော် ဖြစ်တတ်တာ သဘာဝပါပဲ။ အခုလို ပြန်တွေး၊ ပြန်ပြောတဲ့ အချိန်မှာသာ ဟာသဖြစ်နိုင်ပေမယ့် တကယ်ကြုံတဲ့အခါတုန်းကတော့ ဟာသ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ စိတ်တွေ ထူပူနေမယ် မဟုတ်လား။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
>လာဖတ်သွားတယ် … အဲလိုပဲ ကိုယ့်ဆီကနေ ထွက်သွားလိုက်တာနဲ့ အရာရာ တလွဲချည့်ပဲနော … ဟာသလေးနှောရေးထားတော့ ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ..
>စာလာဖတ်ပါတယ်ဗျာဆက်ဖတ်ရန်ဆိုတဲ့လင့်ကိုဝင်မရဘူးဖြစ်နေလို့ တ၀က်တပျက်နဲ့တပ်ခေါက်သွားပါတယ်အင်အားပြည့်မှ ပြန်လာဖတ်မယ်. . .တပ်ကူသွားခေါ်ဦးမယ် ( ကျော်ဖို့ခွဖို့)
>ကိုရေချမ်းရေ..သတိတယ လာပြောတာ ကျေးဇူးပါနော်… တွေ့ တွေ့ ချင်းလာဖတ်ပါတယ်…ရယ်ရတယ်…အတွေ့ အကြုံတွေ ရတယ်… ပြီးတော့ ခံပြင်းတယ်…မြန်မာဆိုရင် အထင်သေးတတ်ကြလွန်းလို့ လေ…
>ကိုချမ်းရေ…. ရောက်တယ်၊ဖတ်တယ်ဗျာ… ကောင်းပါလေ့ ဗျာ…
>ကိုချမ်းစံ ရေအရေးအသားကလည်း ကောင်းတယ်အစ်ကို၊ ဖတ်ပြီးရယ်နေရတယ်။ နေ၀န်းထွက်ရာ မြေသို့(၁) ရှိသေးတယ် ထင်တယ်နော် အစ်ကို။ နောက်မှ ပြန်လာရှာပြီး ဖတ်မယ်နော်။ 🙂
>တကယ်ပါဘဲဗျာ အလို အတွေ့ အကြုံ တွေဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်မရပါဘူး အစ်ကိုက စာရေးကောင်းလို. ပေါ်လွင်အောင်ရေးသွားနိုင်တာလည်း ပါပါတယ် … တကယ်ပါဗျာ သူများနိုင်ငံမှာ ဘာမှ အဆင်ပြေ ချောမွေ.တယ် ဆိုတာတော. မရှိပါဘူးဗျာ …. အခွင်.အရေးမယူတတ်တဲ့ အဲ အစ်ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ရယ် မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်ဗျာ … အောင်မြင်သောဘ၀ တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ …
>အပိုင်း(၂)ကို လာဖတ်ပါတယ် ကိုရေချမ်းစံရေ…ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ရေခြားမြေခြားရောက်သွားရင်တော့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ရမှာ အမှန်ပဲလေ။ စာသားအရေးအသားတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်။ အကိုရေးတာတွေ ဖတ်ရင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်အလွဲလေးတွေလည်း မှတ်မိသွားလို့ :)ထာဝရပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ခင်လျက်ဝိုင်း
>မမေ့နိင်စရာအတွေ့အကြုံတွေပေါ့တယောက်နဲ့တယောက် ကြုံတွေ့ရပုံချင်း မတူပေမယ့်လွဲခဲ့ရတာတွေတော့ အများကြီးပါပဲလေ…။အစအဆုံး စိတ်ဝင်တစားဖတ်ဖြစ်သွားအောင် ဆွဲဆောင် သွားနိင်တယ်။
>ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အေးမြနဲ့တွေ့ရင်တော့ အေးမြသွားရမှာပါ…းဝ)
>ရွှေကပြောသော ဗမာ »